Ukufuna Injini Yokucinga, i-PPC ne-SEO Blog
Umaki: Linganisa i-CP
Ukuthatha Isiza Sakho Samazwe Ngamazwe Ngosesho
NgoLwesithathu, Agasti 10, 2011 NgoLwesine, ngo-Okthoba 27, 2011 Douglas Karr
Sibe nenselelo nobumnandi bokusebenza namaklayenti ambalwa ngamathiphu wokuthatha isayithi labo umhlaba jikelele uma kukhulunywa nge-SEO. Siphinde sibe namanye amaklayenti angafuni ukukleliswa emhlabeni jikelele kepha athole ithani lomgwaqo wamazwe omhlaba. Ukuthola injini yokusesha efana ne-Google ukuqonda inhloso yakho yokwenza okwasendaweni noma ukwenziwa kwamazwe omhlaba akulula njengokusetha izwe elihlosiwe kuma-Webmasters… kuthatha umsebenzi omningi kakhulu. Kusetshenzisiwe
Abantu abaningi basebenzisa futhi bathengise isikhathi sabo ekusebenzeni kwewebhusayithi yabo, futhi bavuse ukunwaya amakhanda abo lapho enye isayithi inezinga eliphakeme kepha ingalungiswa. Kungenxa yokuthi ukwengeza okuqukethwe yingxenye yempi kuphela, ukuthola ukunakwa kwamanye amasayithi acindezela isayithi lakho ukuthi libe nemiphumela yosesho. Umsebenzi wenjini yokusesha ukuhlinzeka ngemiphumela efanele. Uma amanye amasayithi amaningi ahlonishwa akhomba kuwe